ICathedral yaseJusto eMejorada del Campo, iAsethi yomdla weNkcubeko? | Iindaba Zokuhamba
Maria | | Izaziso, Yintoni ongayibona
Ukusukela kwilitye lokuqala elalibekwe ngo-Okthobha u-1961 ngomhla we-Virgen del Pilar ukuza kuthi ga kulo mhla, umhlaba uye wamangaliswa lilitye ngalinye eliphakanyiswe nguJusto Gallego ukwakha itempile yakhe enkulu eyenziwe ngezinto ezenziwe ngokutsha kwezinto ezenziwayo. Kulwakhiwo olusisigxina ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane kwaye ngaphandle kwezicwangciso, iilayisensi zokwakha okanye iiprojekthi zobuchwephesha, iJusto Cathedral ibisoloko ihlala nomoya wokudiliza.
Uloyiko lwabamelwane kunye nabakhenkethi ngaphambi kokuvalelisa kwetempile ngala mhla umakhi wayo engekabikho kuye kwavelisa ukusabela kokuqala.
Onke amaqela ezopolitiko akhoyo kwiseshoni yamalungu ebhunga ledolophu aphumeze isindululo esenziwe liqela le-UPyD lokumiselwa ngokusemthethweni kwetempile yaseJusto kunye nokukhuselwa kwayo njenge-Asethi yeMidla yeNkcubeko. Ukusuka apha kuxhomekeke kurhulumente kamasipala ukuba aqokelele onke amaxwebhu ayimfuneko kwaye alungiselele iingxelo kunye nezicwangciso zokuqala ifayile.
Ngaphandle kwamaphepha kunye nokwamkelwa njenge-Asethi yeNzala yeNkcubeko, uJusto Gallego ucacile ukuba icawa yecawa enkulu ingaphezulu kwendawo yokutyelela. KUNYEYitempile yomthandazo enikezelwe kwiVirgen del Pilar kodwa kuqala kufuneka igqityiwe kwaye igunyaziswe ngokusemthethweni ukuba inike ubunzima.
1 Iphupha lomntu
2 Ukwazi iprojekthi yakho
3 Kuza kwenzeka ntoni emva koko?
4 Uphi i-Justo Cathedral?
Ibali likaJusto Gallego libali lokholo kunye nomzamo wokufezekisa iphupha. Ngo-1925 wazalelwa eMejorada del Campo kwaye, ngenxa yeenkolelo zakhe eziqinileyo, wagqiba kwelokuba achithe ubutsha bakhe kwigumbi leemonki laseSanta María de Huerta. Isifo sephepha sanciphisa izicwangciso zakhe kwaye kwafuneka ashiye esoyika ukosuleleka okukhulu.
Uye wakwazi ukoyisa isigulo emva kwexesha kodwa waqala waba noxinzelelo kuba eso siqendu sawunqumamisa umnqweno wakhe wokuzinikela kubomi benkolo. Nangona kunjalo, uThixo wayenamanye amacebo ngaye. Intetho edumileyo ithi iindlela zeNkosi azinakuchazwa kwaye kwi-60s, UJusto Gallego ufumene enye indlela yokwenza ubomi bakhe bube nenjongo: ukwakha icahedral enikezelwe kwiVirgen del Pilar kwidolophu yakhe.
Into emangazayo kwimbali yakhe kukuba ngaphandle kolwazi lokwakha okanye lokwakha waqala ukwakha icawa yakhe enkulu kwifama yepropathi yakhe. Iphefumlelwe ngokukodwa ngamathedrali amakhulu awayeyibonile kwiincwadi ezininzi zobugcisa.
Wayethengisa izinto zakhe ukuhlawulela iindleko zokuthenga izinto de baphele. Emva kwexesha uqhubeke nokusebenzisa izinto ezihlaziyiweyo kwaye ngoncedo lwabantu kunye neenkampani ezinomdla kwiprojekthi yakhe.
Ukwazi iprojekthi yakho
Okwangoku iCathedral yaseJusto eMejorada del Campo ithatha umhlaba we-4.740 yeemitha zesikwere ngemilinganiselo engakholelekiyo: i-50 yeemitha ubude kunye ne-20 ububanzi ukuphakama kweemitha ezingama-35 ukuya kuthi ga ezindlwini. Inezitroli ezimbini zeemitha ezingama-60 kunye nazo zonke izinto ezinobuntu kwicawa yamaKatolika: isibingelelo, i-cloister, i-crypt, izinyuko, iifestile zeglasi, njl.
Njengokuba oko kwakungonelanga, le tempile ikwangumzekelo wokuzibophelela kwindalo esingqongileyo kuba uninzi lwezixhobo ezisetyenzisiweyo kulwakhiwo lwayo zivela kwiimveliso eziphinda zenziwe zanikezelwa ziinkampani zokwakha kuloo ndawo.
Ngokuchasene noko uninzi lukholelwa, i-Mejorada del Campo icawa yecawa namhlanje yindawo yabucala, hayi eyasesidlangalaleni. Nangona kunjalo, u-Justo uvula iminyango ukuze abo banomdla emsebenzini wakhe bawuqwalasele kufutshane kwaye, ukuba bayathanda, banakho ukufaka isandla ngeminikelo encinci.
Okwangoku, ukusinda kwe-Mejorada del Campo Cathedral emva kokubhubha komakhi wayo kuyimfihlakalo nangona kubonakala ngathi ibhunga lesixeko libeke isicwangciso endaweni yokulijika libe yi-Asethi yeNzala yeNkcubeko.
Ngayiphi na imeko, abo bazibandakanye nomsebenzi wakhe kule minyaka idlulileyo bathi, emva kokubhubha kukaJusto, bazokulwela ukufezekisa iphupha lakhe. Kwelakhe icala, uJusto uyangqina ukuba wakhe icawa yecawa yakhe yokuzukisa uThixo kwaye waziva onwabile ngento esele ayenzile ebomini bakhe.
Uphi i-Justo Cathedral?
Kwi-Calle Antonio Gaudí s / n eMejorada del Campo (eMadrid). Ukusuka eMadrid unokufika apho ngemoto malunga nesiqingatha seyure. Umnyango wokundwendwela ukhululekile kodwa iminikelo yamkelwe ukuyigqiba. Kususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ukusuka ngo-09: 00 kusasa ukuya ku-18: 00 emva kwemini nangoMgqibelo ukususela ngo-09: 00 kusasa ukuya ku-16: 00 emva kwemini. IiCawe neeholide zivaliwe.
Nawuphi na umntu, okholwayo okanye ongakholelwayo kubukho bukaThixo, owaziyo ukuba angaqonda njani iinzame kunye nokuzimisela kwale ndoda indala ithobekileyo uyakonwabela ukucinga ngale projekthi imangalisayo yemilinganiselo engaphezulu kwesiqingatha senkulungwane ebiseMejorada del Campo etyeshela ukuhamba kwexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Izaziso » ICathedral yaseJusto eMejorada del Campo, iAsethi yomdla weNkcubeko?
IHuanglong, amachibi amibala-bala kunye neLifa leMveli leHlabathi
I-Sephardic Museum yaseToledo, uhambo oluya kwinkcubeko yamaSpanish